China Sodium Hyaluronate 1% ဖြေရှင်းချက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ |LI လူငယ်
Super water-holding capacity သည် အရေပြား၏ အစိုဓာတ်ကို ထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။Sodium Hyaluronate မော်လီကျူးများတွင် ရေနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ရေပမာဏများစွာဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော carboxyl နှင့် hydroxyl အုပ်စုများစွာပါ၀င်သောကြောင့် အသားအရေကို စိုစွတ်မှု၊ တောက်ပြောင်မှုနှင့် ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။
1. Super water-holding capacity သည် အရေပြား၏ အစိုဓာတ်ကို ထိရောက်စွာ ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သည်။Sodium Hyaluronate မော်လီကျူးများတွင် ရေနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ရေပမာဏများစွာဖြင့် ပေါင်းစပ်နိုင်သော carboxyl နှင့် hydroxyl အုပ်စုများစွာပါ၀င်သောကြောင့် အသားအရေကို စိုစွတ်မှု၊ တောက်ပြောင်မှုနှင့် ပျော့ပျောင်းစေပါသည်။
2. အသားအရည်ကို လျင်မြန်စွာ ဖြည့်တင်းပေးလို့ အသားအရေကို နုပျိုချောမွေ့စေပြီး ချက်ခြင်းအသစ်ပြန်ဖြစ်လာစေပါတယ်။ထို့အပြင်၊ Sodium Hyaluronate သည် နေရောင်ခြည်၏ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တက်ကြွသော အောက်ဆီဂျင် အခမဲ့ အစွန်းရောက်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီး အရေပြားကို ကာကွယ်ရန်၊
3. ဆဲလ်ဖွဲ့စည်းပုံအား အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ အရေပြားပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပြီး ပြုပြင်ပေးပြီး ချောမွေ့သောလိုင်းများ။
4. အသားအရည်ကို တင်းမာစေပြီး ပျော့ပျောင်းစေကာ အသားအရေကို ပြေလျော့စေကာ အရေပြား၏ သွေးလှည့်ပတ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ပြင်ဆင်ဖော်မြူလာ
ကုန်ကြမ်း : Sodium Hyaluronate Power ၊ 0.2-1% Antibacterial Agent ၊ Purified Water ။
ကိရိယာများ- တိုင်းတာသည့်အိုး၊ မွှေဘား (အပူချိန်မြင့်မားသောပိုးသတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားများကို 15 မိနစ်ကြာအောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။)
1.သန့်စင်ထားသောရေ 100ml (တွင်းထွက်ရေမဟုတ်) ကို တိုင်းတာခွက်ထဲသို့ ထည့်ပါ။
၂။pခွက်ထဲသို့ ဆိုဒီယမ် Hyaluronate ပါဝါ 1g ၊ ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အညီအမျှ မြုံနေရန် လိုအပ်ပါသည်။
3. Antibacterial Agent ၊ 100ml ဖျော်ရည်တစ်ခုလျှင် 8 drops ပါ၀င်ပါ။
4.ကြည်လင်ပြီး ပွင့်လင်းသောဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ဆိုဒီယမ် hyaluronate ဖြေရှင်းချက် ပြီးမြောက်သည်အထိ 24 နာရီ အနားယူပါ။
Sodium Hyaluronate 1% solution ကို အရေပြားပေါ် တိုက်ရိုက်အသုံးမပြုနိုင်ပါ၊ အသုံးမပြုမီတွင် ရေဆေးရပါမည်။ကိုယ်ရေးကိုယ်တာခံစားမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မတူညီသောအသားအရေအလိုက် မတူညီသောအာရုံစူးစိုက်မှုကို သင်ကြိုးစားနိုင်သည်။အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားလေ၊ viscosity ကြီးလေဖြစ်သည်။
1. Low molecular weight solution သည် moisturizing essence ကဲ့သို့ဖြစ်သောအခါ ပိုကောင်းသည်။
2. lotion ၊essence ၊cream နဲ့ ရောပြီး moisturizing effect ပိုကောင်းပါတယ်။
3. hair lotion နှင့် body lotion တွင် ထည့်နိုင်သည်။
4. Facial Mask မလိမ်းခင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
5. သတ်မှတ်အသုံးပြုမှု ပြုလုပ်ပါ။
Toner အနေဖြင့် 1ml Sodium hyaluronate solution နှင့်9ml hydrosol တို့ကို ရောစပ်ပြီး ပျော်ဝင်ကာ toner အဖြစ် မျက်နှာဖုံးကို Mask စက္ကူဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး နေ့ဘက်တွင် ရေအမြဲတမ်း ဖြန်းပေးခြင်းဖြင့် ရေတစ်ခုတည်းထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အစိုဓာတ်ကို ရရှိစေပါသည်။
အနှစ်သာရအနေနဲ့- 2ml Sodium Hyaluronate solution နှင့် 8ml hydrosol တို့ကို ရောစပ်ပြီး အရည်ဖျော်ပြီး ခရင်မ် သို့မဟုတ် ဆေးရည်မလိမ်းမီ အသုံးပြုပါ။
1%-3% ဝန်းကျင် : lotion နှင့် cream တစ်စက် ကဲ့သို့သော ရေဓာတ်ကို Essence နှင့် အခြားသော skin care products တို့နှင့် ရောစပ်၍ ပိုမို ပျစ်စေပါသည်။
1% အောက်- ပျော့ပြောင်းသောရေအဖြစ် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပါ။
၁။ မိလ္လာကို ဂရုစိုက်ပါ။ဖျော်ထားသောရေသည် သန့်စင်သောရေ သို့မဟုတ် ပေါင်းခံရေကို အသုံးပြုရမည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပိုက်နှင့်ရေကို မသုံးပါနှင့်။အသုံးမပြုမီ ကိရိယာများနှင့် ကွန်တိန်နာများအားလုံးကို သန့်စင်ပြီး ပိုးသတ်ရပါမည်။
2. Antibacterial Agent မပါဘဲ Sodium Hyaluronate ဖြေရှင်းချက်ကို အအေးခန်းတွင် တစ်လခွဲထားနိုင်ပြီး Antibacterial Agent ဖြင့် အခန်းအပူချိန်တွင် တစ်နှစ်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
3.Sodium Hyaluronate သည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ polysaccharide တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ကျေးဇူးပြု၍ အရည်များကျန်ရှိလျှင် အရည်ပျော်သွားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများထည့်ကာ Cryopreservation တွင် သိမ်းဆည်းပါ။
4.Sodium Hyaluronate ပျော်ရည်ကို cationic surfactant နှင့် cationic ကြာရှည်ခံပစ္စည်းများဖြင့် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
5.Sodium Hyaluronate ပါဝါသည် အစိုဓာတ်ကို စုပ်ယူရန် လွယ်ကူသည်၊ ထုတ်ကုန်ကို အမှောင်၊ မှောင်၊ ခြောက်သွေ့၊ နိမ့်သော အပူချိန် (၂-၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) နေရာတွင် အလုံပိတ် သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်။
ယခင်- Cosmetcs အဆင့် Y-polyglutamic အက်ဆစ်
နောက်တစ်ခု: Food Grade Sodium hyaluronate
Multi Threads 23G-38mm/60mm L-အမျိုးအစား
စိုက်ပျိုးရေးအဆင့် Gamma Polyglutamic Acid (γ-P...
Cross Linked Hyaluronic Acid Hyaluronic Acid ၊ Pdo Cog Threads Hyaluronic Acid ထိုးဆေး Dermal Filler ၊ ထိုးဆေး Dermal Filler